ယောက်ျားတွေ ဘာကြောင့်လိမ်ပြောကြ တာလဲ ?????? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ယောက်ျားတွေ ဘာကြောင့်လိမ်ပြောကြ တာလဲ ??????
Posted by Mobile House on Sep 22, 2010 in Short Story |3comments
ဟုဖြေလိုက်သော် မြစ်စောင့်နတ် လည်း ကျေနပ်ပြီး သစ်ခုတ်သမား ၏ ရိုးသားမှုကို အသိအမှတ်ပြုသော အားဖြင့် ပုဆိန်သုံးလက်စလုံးကို သစ်ခုတ်သမားအားပေးလိုက်လေသည်….
ဟုအမှန်အတိုင်းဖြေလိုက်တော့ မြစ်စောင့်နတ်လဲ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပြီး .. ခဏအကြာ “တင်ဇာဝင့်ကျော်” နဲ့ ပြန်ရောက်လာပြီး
သစ်ခုတ်သမားက “ခွင့်လွတ်ပါ.. အရှင် နတ်မင်းကြီး … ကျွန်တော်လိမ်ချင်လို့ လိမ်ရခြင်းမဟုတ်ပါ…အကယ်၍ “တင်ဇာဝင့်ကျော်” ကို ကျွန်တော့် မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူး ဖြေလိုက်သော် .. နတ်မင်းကြီး လည်း “မိုဟေကို” ကိုပြပေလိမ့်မည်… အကယ်၍ “မိုဟေကို” ကို ကျွန်တော့် မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူး ဖြေလိုက်သော် .. နတ်မင်းကြီး လည်း ကျွန်တော် မိန်းမ ကိုပြပေလိမ့်မည်… ထိုအခါ ကျွန်တော်မျိုးက အမှန်အတိုင်း ဟုတ်ပါသည် ဟုဖြေသော် အရှင် နတ်မင်းကြီး က ကျွန်တော့်ကို မိန်းမသုံးယောက်စလုံးပေးပေလိမ့်မည် …။ အရှင် နတ်မင်းကြီး ကျွန်တော်မျိုးသည် အလွန်ဆင်းရဲ ပါသည် ထိုကြောင့် ဘယ်လိုမှ မိန်းမသုံယောက်ဝမ်းဝအောင် ရှာမကျွေးနိုင်ပါ .. ထိုကြောင့် “တင်ဇာဝင့်ကျော်” ကို ကျွန်တော့် မိန်းမ ပါဟု ဖြေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ”
ဤ ပုံပြင်လေး ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ … ယောကျာ်းများ လိမ်ပြောသည်ဆိုရာတွင် လိမ်ချင်၍ မဟုတ်ပဲ…. အများ ကောင်းကျိုးအတွက် ရိုးသားစွာ လိမ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ….. “အဖြူရောင် မုသား” များသာဖြစ်ကြောင်းသိစေလို၍ ဖြစ်ပါသည် …..
ဟာ မိုက်တယ်ကွာ ဘယ်လိုအကြံရပြီး ရေးထားတာလဲ